Intombazana nganye ibukele. Ininzi yexesha esihlawula ngayo ukunakekelwa kwesikhumba kunye neenwele, kodwa sihlala sikhohlwa malunga nezipikili, ngokukodwa malunga nezikhonkwane. Ngoko ngamanye amaxesha asiqapheli ukuba baqala ukwahlukana.
Izipikili ezisemilenzeni ziphukile: yintoni enokuyenza
Izizathu zokuqhekeka kwezipikili kwimilenze
1. Iimveliso zonyango ezisezantsi
Abasetyhini abaninzi banopopayi izikhonkwane zabo ezinobuncwane obuncinci. Ewe, kunye nombane wokususa i-varnish asiyisebenzisi rhoqo. Kodwa iziqhumiso zomgangatho onobungozi zinempembelelo enobuncwane kwiplantshi. Ngoko ke ungalondolozi imali yamalaki. Ngaphandle koko, kuya kufuneka uchithe amandla amaninzi nemali kwixesha elizayo ukubuyisela imilenze yepiki.
2. Vala izicathulo ezingakhawulezileyo
Abasetyhini abaqhelekileyo ekukhetheni izicathulo zikhokelwa yimbonakalo, kungekhona ngenduduzo. Sithanda ukuva ubunzima beeyure ezimbalwa ngenxa yokuhle, kodwa oku kunokukhokelela kwimiphumo emibi. Izicathulo ze-Tight - enye yezizathu zembombo yesipulelo sesilumkiso. Ngoko ke, soloko ukhetha kuqala kwi-t-shoe, apho ukhululekile.
Esi sifo esiqhelekileyo esichaphazela amadoda namabhinqa. I-fungus ingathintela kuphela i-plail ye-nail, kodwa nayo inesikhumba kwinkathalo efanayo kunye neyonyango engafanelekanga. Ungayifumana naliphi na indawo: kwisitya, kwindawo echibini, elunxwemeni njalonjalo. Qaphela ukuba isifo sefungal silula: isamba sesilumko sitshintsha umbala wayo kwaye siba yi-opaque. I-Nogtimogut ibe yintsholongwane, i-gray and even greenish. Emva kwexesha, isicilisi se-nail siba namandla kwaye siqala ukukhupha. Ukuphelisa ngokupheleleyo i-fungus, kufuneka ubone ugqirha.
4. Ukuhamba kwegazi kakubi kwimida
Ukusabalalisa kakubi kungabangelwa zizinto ezininzi: indlela yokuphila yokuhlala, imilenze ye-varicose njalo njalo. Ingabangela ukucwangciswa kwezipikili. Ukuthintela kunconywa ukuba wenze imisebenzi yokuzivocavoca engaqhelekanga imihla ngemihla. Khupha iisokisi zakho kwaye uhlale kule ndawo iminyaka engama-20, uze uhlaziye iisokisi omnye nomnye uze uhlale, uzikhuphe uze ubambe. Ukujikeleza kweenyawo kunceda. Le gymnastics inokwenziwa nanini na.
5. Ukusika okungalunganga nokufakela izipikili
Kule ngxaki kunzima ukunika nayiphi na ingcebiso. Emva koko, indima enkulu kule meko yimilo yezipikili. Kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba xa usika izikhonkwane akudingeki ujikeleze. Kubalulekile ukwenza umgca ochanekileyo kwaye ushiye ubuncinane i-1 mm ye-edge edge. Khawukhawuleze izibheno zakho rhoqo. Sebenzisa kuphela izixhobo ezicocekileyo nezicwangcisiweyo.
Ukuze ugweme ukugqithiswa kwetafile yesikhonkwane, ungasebenzisi iifayili zetsimbi. Kungcono ukusebenzisa iifayili okanye iiglasi zeefayili ezikhombisayo. Ukuthoba isilumkiso, ifayile engaphantsiyo kufuneka ifayile ifayile. Iingxowa ezifakwe kwiisilonda azikwazi ukuxutywa okanye zihlulwe. Oku kuya kubangela umonakalo omkhulu kwiplani yesilumkiso.
6. Ukutya okungalinganiyo kunye nokutya
Abanye besetyhini badla ngokugqithiseleyo kwisidlo. Oku kuchaphazela imeko yendalo yonke, kubandakanywa nemeko yezipikili. Ngoko ke kubaluleke kakhulu ukugcina umkhondo wokutya. Kwaye nokuba uya kudla, ungalibali malunga nama-multivitamines.
IiVithamini eziyimfuneko kwizipikili
Izikhonkwane zaseTonon zaziphilile, kufuneka ukwazi ukuba yeyiphi iivithamini ezifunekayo kule nto. Iiprotheyini ezibalulekileyo zepiki kunye neenwele iprotheni. Iiprotheyini yizinto zokwakha zendalo yonke. Umntu uyadinga ngaphantsi kwe-1 g yeprotheni nganye ngekg isisindo somzimba. Le nto inokufumaneka kwiintlanzi, inyama, amaqanda.
Ukungabikho kwe-calcium kunye ne-magnesium kunciphisa kakhulu impilo. Ezi zinto zikhutshwa ngokukhawuleza emzimbeni wethu ngokungondleki. I-normagnesium yansuku zonke i-300 mg. Ukuba awuyidli ngokutya okwaneleyo, ngoko kufuneka uthabathe amalungiselelo e-magnesium.
Kanye ne-magnesium, kufuneka uthathe i-calcium. Ukuze kulungele ukufana nale micimbi emibini, i-vitamin D iyadingeka. Ngoko ke, kukulungele ukuthatha i-vitamin ekhethekileyo. Kodwa into ephambili akuyikuyidlula, njengoko ukugqithisa kwezi zinto kungakhokelela kwisiphumo esibi.
Ngokuqhelekileyo imbangela yokuchithwa kwetafile yesikhonkwane kukuba ukungabikho kwe-silicon. Ukuphucula umzimba wakho ngale nto, kuyimfuneko ukuzisa ekutya kwakho ukutya okunjalo: iibhanana, iparsley, i-lettuce, inamba yeembotyi.
Ngamanye amaxesha izipikili zixhomekeke ngenxa yokungabi ncitshi emzimbeni. Le ngxaki ibaluleke kakhulu kubafazi. Emva koko, ngeli xesha, silahlekelwa yinxalenye enkulu yale nxalenye. Ukwenza ukusilela kwesebe, kufuneka udle izikhupha zeqanda, izityalo, izilwanyana ezinomzimba, inyama yesilwanyana kunye nemifuno.
Unyango lwezipikili ezihlukanisiweyo
1. Izimonyo zonyango
Sebenzisa yonke imihla ikhefu ekhethekileyo kunye neoli yekhonkco. Ziyathengiswa kwii-pharmacy kunye neevenkile. Kwiziqholo ezinjalo, njengomthetho, iqukethe yonke i-tarin, i-panthenol, i-liposomes kunye nezinye izondlo ezikhawuleza ukukhula kwetafile yekhonkwane. Kwakhona luncedo ngamagosa, aqukethe i-vitamin C kunye neprotheni. Ezi zinto zomeleza isikhonkwane.
Lungisa isantya seenyawo ulwandle ityuwa. Ulwandle lutyuwa luqukethe izinto ezininzi ezincedo, kuquka i-iodine, enefuthe elihle kwizipikili. Gcina imilenze kwindawo yokuhlambela imizuzu eyi-15, ke nge-brush esithambileyo kwindawo yokujikeleza i-cuticles. Unokufaka isicelo kule ndawo glycerin okanye i-detskomylo. Ukuxilisa kufuneka kwenziwe kathathu ngeveki.
Ukuba izipikili zinamandla kakhulu, ngoko unokwenza iiparafini. Le nkqubo inokwenziwa kwikhabini okanye ekhaya. Inkqubo inezigaba eziliqela. Okokuqala, hlamba kakuhle ngesepha kunye namanzi kwindawo epholileyo yesikhumba kwaye usebenzise i-disinfectant. Emva koko vavanya isikhumba kwiparafini. Ukwenza oku, sebenzisa iparafini encinci kwindawo ebonakalayo yesikhumba, kwaye ukuba akukho mpendulo ephazamisayo, qhubeka kwinkqubo.
Okunitenogi kwiparafini etyhidiweyo ngemizuzwana eyishumi, uze ubakhuphe ngokufutshane kwaye uphinde uphinde. Kufuneka ube neendlela ezi-3-5. Emva kwalo myalelo kwimilenze yakho iya kugqitywa iiparafini ezininzi. Lindela kude kube iparfini ikhuni, kwaye ufake iiplastiki kwiinyawo zakho. Gqoka amasokisi afudumele phezulu. Emva kwesigamu seyure, susa iingxowa ezinyaweni zakho uze ususe ngeparafayili kwiintambo zakho. Emva koko, gubungula izipikili nge-ukhilimu onondlo. I-khilimu isetyenziselwa ukunyakaza.
4. Masks kunye neenkomfa
Hlanganisa ama-25 amagremu e-glycerin, i-70 grams yamanzi kunye ne-5 gram ye-alum. Kwimveliso ye-tissu ye-izvestokunite eyenza i-tecu ethuntsheni kwiiplati ezikhohliweyo. Ingxowa ngeplastiki kwaye ubeke iisokisi ezifudumeleyo. Le nkcenkcesho iyimfuneko ukugcina ubuncinane isiqingatha seyure.
Kwakhona kuncedo ukucoca ioli yeoli kwiisoni zakho. Emva kwenkqubo enjalo, kubalulekile ukugqoka iisokisi zekotoni. Yenza le nkqubo ebusuku. Esi sixhobo siyakulungele ukuthintela isixokelelwano sezipikili.
Le nqubo iyenziwa kwiipilisi zokuhle. Izipikili ezikhethekileyo zisetyenziswe kwizipikili, eziqulethe zonke iivithamini eziyimfuneko. Izixhobo zokuphilisa ziyaxutywa kwisikhokelo ngendlela ekhethekileyo kwaye ziveki ezimbini. Ukubhinqa okukhuselekileyo kunye nokuhlobisa izithambiso zisetyenziswe ukusuka phezulu.
Ukuphulukisa iipropati zobusi be-linden
Ukutya okunciphisa ama-60: zokupheka izitya ezimnandi zenkqubo
Imiqolo yemifuno yeklabishi yamagqabi
I-pie kunye ne-strawberries, i-rhubarb uze ufefe